Paris Descartes University - Study in France. Waxbarashada Yurub
gaabinta : UPRD
aasaasay : 1150
Ha iloobin in aad wada hadlaan Paris Descartes University
Qor at Paris Descartes University
Paris Descartes University sidoo kale loo yaqaan “Paris V“, waa jaamacad cilmi dadweynaha Faransiis oo ku yaalla Paris. Waxaa iska leh isbahaysiga waxbarasho ee ugu horeeysa Sorbonne Paris Cité. Waxaa la aasaasay si ay u guulaystaan ​​waaxda themedicine hay'adda tacliinta dunida ee labaad ugu da'da weyn, ah University of Paris (badanaa loo sida Sorbonne), wax yar ka hor si rasmi ah ugu dambaysta ee guntiga u gaabsaday on December 31, 1970, sidii natiijo ah oo kacaanka Faransiis dhaqanka 1968, badanaa loo yaqaan “Faransiis May ee”. Waa mid ka mid ah ugu wanaagsan oo ah jaamacadaha ugu qiimaha Faransiis, inta badan ee meelaha cilmiga caafimaadka, cilmiga Biomedical, sharciga, sayniska kombiyuutarka, dhaqaalaha iyo cilmi nafsiga.
Xarunteeduna tahay magaalada taariikhiga hôtelière de Chirurgie in arrondissement 6aad ee Paris, jaamacadda si xoog leh diiradda saarayaa cilmiga caafimaadka (daawo, daawada ilkaha, farmashiyaha, cilmi nafsiga), cilmiga Biomedical (biology gacanta iyo kelli, Kiimikada noole, chemistry, physic Biomedical), cilmiga bulshada (cilmiga, cilmiga aadanaha, cilmi afaf, tirakoobka, sayniska waxbarashada), xisaabta, sayniska kombiyuutarka iyo sharciga (sharciga technology macluumaadka, sharciga ganacsiga, sharciga canshuurta, sharciga dadweynaha, sharciga gaarka ah…).
pole A weyn ee cilmi-baarista iyo waxbarashada, Paris Descartes – Sorbonne Paris Cité waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu caansan ee France iyo mid fiican in domains ay ugu weyn. On in saldhig ka mid ah kuwa kale, waxaa la qiimeeyo oo ay 2013 QS World University saraysiinta 51-100th ee Farmashiyaha iyo Farmashiga (1st ee France), 101-150th ee Biological Sciences (1st ee France), 100th ee Medicine (ugu horeysay ee France), 151-200th ee Psychology (1st ee France), 151-200th Luuqadaha (2nd ee France), iyo 151-200th ee Law (2nd ee France). Waxaa sidoo kale lagu qiimeeyo by 2015/16 The Tacliinta Sare Times qiimeynta Subject sida 73aad (2nd ee France) Jaamacada ugu fiican Clinical, Pre-caafimaad iyo Health.
The University Paris Descartes taageertaa hab casri ah oo cilmiga bulshada ku salaysan qataan, qaybgale dhawrid iyo ethnography (degree Master ee cilmiga aadanaha ee dhaqanka iyo bulshada, at School ee aadamaha iyo cilmiga bulshada – Sorbonne). Darajada sayidkiisii ​​dual (“Dhaqaalaha iyo Psychology” iyo “Cogmaster”) isagoo la kaashanaya hay'adaha kale ee muhiimka ah Faransiis tacliinta sida Pantheon-Sorbonne University iyo Normale hôtelière Supérieure xoojinayaa fursadaha bixiyey iyo tan iyo cilmi-baarista ka walaacsan.
xubnaha Kulliyadda ayaa waxaa ka mid ahaa Garsoorayaasha qudbad, dhakhaatiirta iyo siyaasiyiinta.
Iyada oo Tababarka iyo cilmi sagaal waaxaha ay (UFR) iyo Institute of Technology (IUT), Paris Descartes University koobay dhammaan beerihii aqoonta cilmiga aadanaha iyo caafimaadka. Waa jaamacadda oo keliya oo ka mid ah gobolka Ile-de-France in ay bixiyaan caafimaad, dawooyinka iyo cilmiga odontological; waaxda caafimaadka ee ay caan ku Europe iyo dunida oo dhan, waayo, tayada sare ee ay tababarka iyo sare ee ay cilmi-.
Saints Peres Kuliyada Biomedical Sciences
Machadka University of Technology (Machadka University of Technology IUT =)
Kuliyadda Xisaabta iyo Computer Studies
Kulliyadda Pharmaceutical iyo Biological Sciences of Paris
Kuliyada Human iyo Social Sciences
Kulliyadda Sports iyo Physical Education (STAPS = Sciences iyo Tabaha ee Jirka iyo Sports Hawlaha)
Jaamacadda ayaa taariikhiga ah ee Paris marka hore u muuqday in qeybtii labaad ee qarnigii 12aad, laakiin waxaa habayn ku 1970 sida 13 jaamacadaha goboleedka ka dib markii arday dibad ee May Faransiis ah. Ka dib bilood khilaafka u dhexeeya ardayda iyo maamulka ee Jaamacadda Paris ee Nanterre, maamulka hoos jaamacad in on May xidhay 2, 1968. Ardayda of Sorbonne u caddeeyey ah xiritaanka iyo cayrinta ku hanjabay ardayda dhowr at Nanterre on May 3, 1968. In ka badan 20,000 ardayda, macalimiinta iyo taageerayaasha socotay dhinaca Sorbonne ah, weli waxaa laga shaabadeeyey off by booliska, kuwaas oo lagu eedeeyay, dhirteeda budad ay, sida ugu dhakhsaha badan marchers ku soo dhawaaday. Inkastoo dadkii badnaa ku kala firdhay, Qaar waxay bilaabeen inay abuuraan darbi ka mid ah wax kasta oo ahayd way dhowayd, halka qaar kalena tuuray dhagaxyo xaareysa, qasbo booliska u Dumayn muddo. Bilayska ayaa markaa kadib ku jawaabay gaaska dadka kaga ilmeeysiiya iyo dadkii badnaa ku amray mar kale. Boqolaal arday oo dheeraad ah ayaa la xiray.
Wadahadalada dumiyey iyo ardayda ku soo laabtay ka dib markii dhismaha ay war been ah in dawladdu ay isku raaceen si ay u furto, oo keliya in la ogaado booliska weli ka dadbaya dugsiyada. Ardaydu waxay hadda arxam u dhow kacaan. dibad kale abaabulay on Gauche Leone ee ardayda on May 10. Marka ay booliisku mudaharaad mar kale iyaga hor istaagay ka soo gudbaya webiga, mar kale dadkii badnaa kor tuureen darbi, taas oo bilayska ka dibna weeraray 2:15 oo aroortii ka dib markii wadahadalo mar kale xidhitaanku. iska hor imaad The, taas oo soo saartay boqolaal qabtay iyo dhaawac, socday ilaa waagu ka mid ah maalinta ku xigta.
Well ka badan hal milyan oo qof oo socod ku maray Paris on Monday, Laga yaabaa 13; booliska inta badan joogay hortiisa. Ra'iisul Wasaaraha Georges Pompidou shakhsi ku dhawaaqay in la sii daayo maxaabiista iyo furitaanka of Sorbonne ah. Si kastaba ha ahaatee, hirka weerarada ma aagaas. Halkii, dibad xitaa more firfircoon helay.
Marka Sorbonne ka furmey, ardayda u degan iyo waxa ku dhawaaqay ismaamul ah “Jaamacadda dadka.” Qiyaastii 401 guddiyada tallaabo caan ah ayaa la dhigay ilaa in Paris, ay ka mid yihiin Guddiga Shaqada ee Sorbonne ah, iyo meelo kale oo toddobaadyada raacay in ay kor u qaado cabashooyinka ka dhanka ah dowladda iyo bulshada Faransiis.
Iyadoo dayrta ee afaraad Republic French ka dib dhacdooyinkii buuqa May 1968, Fifth Faransiis Jamhuuriyadda jeediyay habaynta kala duwan weyn ee nidaamka jaamacad Faransiiska. In 1971, shantii kulliyadood hore ee University hore ee Paris kala dildillaaceen ka dibna dib-sameeyay galay saddex iyo toban jaamacadaha maadooyinka by Law Faure ah.
Afar ka mid ah jaamacadaha cusub hadda wadaagaan goobta dhismaha Sorbonne taariikhiga ah, taas oo, ilaa wakhtigaas, ayaa inta badan loo qoondeeyay Caqlina Arts iyo Sciences Human. Kuwani afar jaamacadood ayaa sidoo kale la siiyey goobta kale ee goobo kala duwan oo dhan Paris.
Saddex jaamacadaha dhawray magaca Sorbonne oo qayb ka ah horyaalka rasmi ah: Jaamacadda Paris waxaan Pantheon-Sorbonne, University of Paris III – New Sorbonne oo University of Paris IV-Sorbonne Paris. The goobta Sorbonne sidoo kale qayb ka mid ah guri Paris Descartes Jaamacadda (dhaxla waaxda Medicine ah) iyo Chancellery ah, maamulka waxbarashada ee Paris.
Ma rabtaa wada hadlaan Paris Descartes University ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: Paris Descartes University rasmiga ah Facebook
dib u eegista Paris Descartes University
Ku biir si ay ugala hadlaan of Paris Descartes University.